Tirada Dadkii ku dhintay Qaraxii Maanta | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Tirada Dadkii ku dhintay Qaraxii Maanta
Tirada Dadkii ku dhintay Qaraxii Maanta
Waxaa isasoo taraya khasaaraha ka dhashay qarixii ka dhacay agagaarka bar-koontorool oo ku taalla Taalada Daljirka daahsoon ee degmada Boondheere,waxaana qaarxa uu ahaa mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabah qarxa.
Xilliga qaraxa uu dhacayay ayaa waxaa Barta-koontorool taagnaa Gawaari farabadan oo qaarkood ay leeyihiin mas’uuliyiin si loo hubiyo,waxaana sida la xaqiijiyay qaraxaas inay ku geeriyootay Sarkaalad ka tirsaneyd Ciidamada Millateriga Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Faadumo Cali Raage.
Sidoo kale waxaa jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray dad Ciidamo u badan,iyada oo la xaqiijiyey inay qaraxaasi ku geeroyoodeen ilaa 5 ruux.
Warar kale oo la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in khasaaro dhaawac ah uu soom gaaray Xildhibaan Shabeel oo katirsan Golaha Shacabka halka Askari ilaalo u ahaa Xildhibaan Maryan Cariif uu qaraxa ku geeriyooday.
Sidoo kale waxaa burbur xoogan uu soo gaaray gawaari ay lahaayeen Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda oo xilliga qaraxa uu dhacayay ku sugnaa Goobta uu qaraxa ka dhacay oo ah Koontorool lagu hubiyo gawaarida u socota Madaxtooyada Soomaaliya.
Previous articleSAWIRO:-Qarax Goordhow ka dhacay Magalada Muqdisho
Next articleSomalia oo jawaab dabacsan siisay Kenya